ချစ်ဇနီးခင်စံပယ်ဦးရဲ့ အသက် (၃၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်တောင်းစကားလေးကို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်လေး ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ လူမင်း – ShwePyiAye
ချစ်ဇနီးခင်စံပယ်ဦးရဲ့ အသက် (၃၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်တောင်းစကားလေးကို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်လေး ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ လူမင်း
By EditorPosted on May 21, 2020
ချစ်ဇနီးခင်စံပယ်ဦးရဲ့ အသက် (၃၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်တောင်းစကားလေးကို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်လေး ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ လူမင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးထိပ်တန်း မင်းသားတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားလူမင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ကာ နှစ်သက်တဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို အကောင်းဆုံး ချပြနိုင်အောင် ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ပြနိုင်သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ကျန်စစ်မင်း ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုတွေကို တစ်ခဲနက် ရရှိခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုများကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သူပါ.။ လူမင်းကတော့ မင်းသားသီဟတင်စိုးနဲ့ စည်သူတင်စိုးတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ညီမလေး ဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားနဲ့ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ကာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်.။ လူမင်းက ဒီနေ့ မေလ (၂၁)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်ဇနီးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်းစာလေးကို “(21. 5. 2020) Happy 36th Birthday . ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ချစ်.။ မွေးနေ့ဆုတောင်းကို သူများနဲ့မတူအောင် ၊ကဗျာဆန်အောင် ၊မရို ရို အောင်ဘယ်လိုပဲစဉ်းစား စဉ်းစား၊ နောက်ဆုံးတော့ အရိုးဆုံးက တန်းဖိုးအရှိဆုံးပါပဲ။ ပြီးတော့ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဆိုတာ နည်း နည်း လာသလားလို့လေ ၊ ရင့်ကျက်ရတာတွေ ၊ ရောင့်ရဲရတာတွေ ကများလာရတယ်မဟုတ်လား ၊ အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးဘဝကလို ဟက်ဟက်ပက်ပက် အပျော်မျိုး ခုနေ ရှာမှရှား ၊ အာ့ကြောင့် ချစ် ကို ပျော်စေချင်တာ ၊ ပျော်အောင်နေပါ ၊ အပေါ်မှာ အသက်ကို ရေးလိုက်တာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်.။ မိန်းမက နုဖတ်အုအက် နေတော့ အသက်မေ့နေမစိုးလို့ ၊ မွေးနေ့လက်ဆောင် စပရိုက် မတိုက်တော့ဘူးနော်.။ အားလုံးကမိန်းမလက်ထဲမှာ.။ တကယ်တော့ လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲပေမယ့် ရလာတော့လည်း တိုတိုလေး ပါ ၊ သမီးလေးနဲ့ သားလေးနဲ့ ယောက်ျားတို့မိသားစု ..ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် နေသွားကြရအောင်နော်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ လူမင်းတစ်ယောက် အသက် (၃၆)နှစ် လို့မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုကာ လှပနေတဲ့ ချစ်ဇနီးလေးကို တကယ့်ကို ချစ်မဝဖြစ်နေဆဲပဲ ထင်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း လူမင်းရဲ့ ချစ်ဇနီး ခင်စံပယ်ဦးအတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ပြောပေးသွားပါဦးနော်.။
Source: Ayarwady Lu Min’s Facebook
ခ်စ္ဇနီးခင္စံပယ္ဦးရဲ႕ အသက္ (၃၆)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ ဆုမြန္ေတာင္းစကားေလးကို ႐ိုမန္တစ္ဆန္ဆန္ေလး ဆုေတာင္းေပးလာတဲ့ လူမင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ႀကီးထိပ္တန္း မင္းသားေတြထဲက တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ မင္းသားလူမင္းကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္.။ က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ကာ ႏွစ္သက္တဲ့ အႏုပညာအရည္အခ်င္းေတြကို အေကာင္းဆုံး ခ်ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသ႐ုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္သူတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္.။ က်န္စစ္မင္း ဇာတ္ကားႀကီးနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးမႈေတြကို တစ္ခဲနက္ ရရွိခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သူပါ.။
လူမင္းကေတာ့ မင္းသားသီဟတင္စိုးနဲ႔ စည္သူတင္စိုးတို႔ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ ညီမေလး ျဖစ္သူ ခင္စံပယ္ဦးနဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားနဲ႔ သမီးေလးကို ပိုင္ဆိုင္ကာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္.။ လူမင္းက ဒီေန႔ ေမလ (၂၁)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ခ်စ္ဇနီးရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ ဆုမြန္ေကာင္းစာေလးကို “(21. 5. 2020) Happy 36th Birthday . ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေမြးေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ခ်စ္.။ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းကို သူမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ ၊ကဗ်ာဆန္ေအာင္ ၊မ႐ို ႐ို ေအာင္ဘယ္လိုပဲစဥ္းစား စဥ္းစား၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အ႐ိုးဆုံးက တန္းဖိုးအရွိဆုံးပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အသက္ရလာတာနဲ႔အမွ် ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဆိုတာ ဆိုတာ နည္း နည္း လာသလားလို႔ေလ ၊ ရင့္က်က္ရတာေတြ ၊ ေရာင့္ရဲရတာေတြ ကမ်ားလာရတယ္မဟုတ္လား ၊ အပူအပင္ကင္းတဲ့ ကေလးဘဝကလို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ အေပ်ာ္မ်ိဳး ခုေန ရွာမွရွား ၊ အာ့ေၾကာင့္ ခ်စ္ ကို ေပ်ာ္ေစခ်င္တာ ၊ ေပ်ာ္ေအာင္ေနပါ ၊ အေပၚမွာ အသက္ကို ေရးလိုက္တာစိတ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္.။ မိန္းမက ႏုဖတ္အုအက္ ေနေတာ့ အသက္ေမ့ေနမစိုးလို႔ ၊ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ စပ႐ိုက္ မတိုက္ေတာ့ဘူးေနာ္.။ အားလုံးကမိန္းမလက္ထဲမွာ.။
တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘဝဆိုတာ ရခဲေပမယ့္ ရလာေတာ့လည္း တိုတိုေလး ပါ ၊ သမီးေလးနဲ႔ သားေလးနဲ႔ ေယာက္်ားတို႔မိသားစု ..ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ႐ႊင္႐ႊင္ ေနသြားၾကရေအာင္ေနာ္” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္.။ လူမင္းတစ္ေယာက္ အသက္ (၃၆)ႏွစ္ လို႔မထင္ရေလာက္ေအာင္ ႏုပ်ိဳကာ လွပေနတဲ့ ခ်စ္ဇနီးေလးကို တကယ့္ကို ခ်စ္မဝျဖစ္ေနဆဲပဲ ထင္ပါတယ္ေနာ္..ပရိသတ္ႀကီး.။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း လူမင္းရဲ႕ ခ်စ္ဇနီး ခင္စံပယ္ဦးအတြက္ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းစကားေလးေတြ ေျပာေပးသြားပါဦးေနာ္.။
Previous post သီဟတင်စိုးရဲ့ ကိစ္စနဲ့ပက်သတ်ပြီး မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေကို အစအဆုံးဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ စည်သူတင်စိုး
Next post သူမရဲ့ မိခင်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နေဝင်းတို့အတိုင်အဖောက်ညီညီ အလုပ်လုပ်နေတာကို ကြည့်ပြီး သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အိမ့်ချစ်ချော